Chengetedza mapassword ako nePassword Factory yemahara kwenguva yakatarwa | Ndinobva mac
Chengetedza mapassword ako nePassword Factory yemahara kwenguva pfupi
Mamaneja epasiwedhi ari kuramba achikurudzirwa, kuve nemapassword edu ese mukati mekushandisa kamwe Mumusika pane sarudzo dzakasiyana, dzinenge dzese dzinobhadharwa kana kumisikidza yemhando yekunyorera.
Sarudzo yemahara, kunyangwe iyo yenguva yakati rebei iri Password Factory. Uyu maneja wephaswedi anotibvumidza isu kugadzira mapassword emarudzi mazhinji uye anotibvumidza kuchengeta aya mapassword. Tinogona kusarudza kuti ndeapi mapassword atinoda kugadzira. Semuenzaniso, inogona kuve yakagadzirwa nemavara, zviratidzo uye manhamba nenzira yakasarudzika, kudzamara kuumbwa kwepassword kuburikidza nemaitiro.
Password Factory yakanga ichangobva kuvandudzwa ku 3.1 version. Iye zvino chizvarwa chemaphasiwedi chinogona kuve chakasarudzika kana kuburikidza nemazwi akasarudzika akasarudzwa kubva mumutsara. Asi iyi purogiramu kubva kumusunguri Christian Yambo, Ine mamwe mabasa. Kune rimwe ruoko, iko kuiswa kunoiswa pane iyo menyu bar kana nzvimbo yekuzivisa. Saka nenzira iyi kuwana kwazviri kunoitwa nekukurumidza uye nyore. Kune rimwe divi, isu tinokwanisa kushandisa mapfupi kuita zvese mapassword uye kuwana yakatarwa password.
Asi mabasa acho haaperere ipapo. Kubva mushanduro 3.0 tinogona kusarudzika mapassword edu ne ICloud, pamwe nezvirongwa zvekushandisa. Naizvozvo, kusunungura iko kunyorera kana kuteedzera kumisikidza kubva kune imwe Mac kuenda kune imwe zviri nyore kwazvo nekuda kweICloud. Uye zvakare, iko kunyorera kune vhezheni ye iOS Naizvozvo kuwiriranisa kunogona kukusevudzira nguva yakawanda pane ese Mac uye iyo iPad kana iPhone.
Iyo yekudzikira ndiyo iyo interface, iyo iri pachena uye yakapusa, pamwe nemutauro. Parizvino iri chete mu English. Kune rimwe divi, masevhisi mazhinji uye akawanda anokumbira kuisirwa zvakapetwa nekutumira SMS kune nhare kana kushandiswa kweGoogle Authenticator, nekudaro, chengetedzo mukuchengetedzwa kwepassword iri kutora chigaro chekumashure uye nemazvo manejimendi mapassword.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac zvirongwa » Mac App Store » Chengetedza mapassword ako nePassword Factory yemahara kwenguva pfupi
Apple Patent: Iyo Kunyange Yakatetepa MacBook Pro Screen